Darpan Nepal – जापानमा डेटिङका नाममा यसरी चल्छ यौनधन्धा
स्कुल गर्ल्स फर सेल इन जापान’ नामक एउटा डकुमेन्ट्री विगत केही महिनादेखि युट्युबमा करिब ६० लाख बढीले हेरेका छन् ।
अमेरिकी मिडियाको यो डकुमेन्ट्रले विकसित देशहरुका टिनेज युवतीहरु कसरी सडकमा पुरुष ग्राहकको प्रतिक्ष गर्छन् भन्ने खुलासा गरेको छ। यी युवतीहरु सामान्यतः एकसाथ हिड्ने, क्याफेमा बसेर कुरा गर्ने वा फुड वा ड्रिंक सर्भ गर्ने सेवाका लागि उपलव्ध हुन्छन्।
डकुमेन्ट्रीमा यी युवतीहरुले डेटिङ मात्र होइन, सेक्स अफर पनि दिन गरेको खुलासा गरिएको छ। डकुमेन्ट्री सार्वजनिक भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले जापानको यो डेटिङ सेवामाथि छानविन गर्ने घोषणा गरेको थियो । १६ वर्षभन्दा कम उमेरका यी युवतीहरु विद्यालय पोसाकमै सडकमा रहने गर्दछन्।
यो कामलाई जापानमा जेके वा जोशी–कोसई विजनेशको नामले बुझ्ने गरिन्छ । यो डेटिङ सेवा केही पुरुष समूहले संचालन गर्ने गरेको बताइएको छ। युवतीहरुले उनीहरुकै संरक्षणमा काम गर्ने गर्दछन् । सामान्यतः ३० देखि ५० वर्ष उमेरका पुरुषहरुले यो सेवा लिने गरेका छन् । एक घण्टासम्म सोशलाइज हुनका लागि युवतीहरुले करिब ५५० रुपैयाँ शुल्क लिने गर्दछन्।
जापानको एउटा संस्था लाइटहाउस सेन्टर फर ह्युमन ट्राफिकिङ्ग भिक्टिमका निर्देशक शिकोहु फुजीवाला भन्छन्–कतिपय अवस्थामा यसमा त्यस्ता युवतीहरु पनि संलग्न हुने गर्दछन् जो पहिला नै यौन हिंसाको शिकार भइसकेका हुन्छन् । जापानको संस्कृतिमा कतिपय पीडितमाथि प्रश्न उठाइने गर्दछ । त्यसैले उनीहरु खुलेर आफ्नो समस्या व्यक्त गर्न सक्दैनन् ।
यसअघि युएस स्टेट डिपार्टमेन्टले पनि जापानमा संगठित वेश्यावृत्ति सञ्जालको विषयमा चेतावनी दिएको थियो । उसले यसको शिकार महिला र किशोरीहरु हुन सक्ने बताएको थियो । स्मरणरहोस् जापानमा बालिका र महिलाको विषयमा स्थिति ठिक नरहेको बताइन्छ । सरकारले निकै ढिला गरेर जुन २०१४ मा मात्र चाइल्ड पोर्नोग्राफीलाई अवैध घोषणा गर्दै कानुन बनाएको थियो । एजेन्सी
Previous Postस्वास्थ्यका लागि व्यायमको महत्व? व्यायममा सोच यसरी महत्वपूर्ण हुन्छ ? Next Postदुःखीलाई जहिले दुःख अनि सुखीलाई जहिले सुख मात्रै मिल्छ, किन?भगवान शिव र पार्वतीको रोचक कथा‘